Yarra Council - Borrowing from Libraries Somali
You are here: Home > Services > Borrowing from Libraries Somali Print Page
Borrowing from Libraries Somali
Ka soo Amaahashada Maktabada
Immisa shey ayaan amaahan karaa ilaa inteese haysan karaa? Tirada laga amaahan karo maktabadaha waa ilaa 30 shey mar kasta kuwaas oo ay ku jiraan 10 DVDs iyo 10 kits. Alaabada badankeed waxaa la haysan karaa ilaa saddex asbuuc, laakiin fiidiyow iyo DVDs-ka waxaa iyaga la amaahan karaa ilaa hal asbuuc.
Maxa dhacaya haddii aanan soo celin waxaan amaahday waqtiga layga rabo? Si aad u xaqiijiso in dad kale isticmaalaan alaabtaan maktabada, waa muhiim inaad soo celiso waqtiga la iska rabo. Haddii aadan soo celin alaabtaas waqtiga la rabo waxaa lagu saari doonaa ganaax.
Lacagta la iska rabaa waa 20 senti asbuucii halkii sheyba. Waa muhiim inaad ogaato haddii aad cusboonaysiinayo sheeyo waqtigoodii dhacay, ganaaxaas waa la diiwaangeliyey.
Haddii aad doonayso inaad amaahato shey qof kale amaah kula maqan yahay? Haddii uu jiro shey hadda amaah lagula maqan yahay oo aad jeclaan lahayd inaad amaahato waa codsan kartaa in laguu hayo. Marka shey la soo celiyo adiga ayaa lagu haynayaa muddo si aad u amaahato sheygaas.
In shey laguu hayo waxay xaqiijinaysaa in aan qof kale la siin adiga hortaa, qof hadda la maqanina ma cusboonaysiin karo.
Sidee u codsan karaa in la ii hayo sheyga maktabada? Ma jirto lacag lagaaga qaadayo shey lagu hayo waxaana laga yaabaa in 30 shey laguu hayo halkii marba.
Waxaad codsan kartaa in laguu hayo shey: • Adiga oo isticmaalaya kaataloogiska maktabadaha • Adiga oo weydiisanaya shaqaalaha maktabada ee miiska soo dhowaynta ama • Adiga oo isticmaalaya kaatolooga onlineka ah.
Sidee u soo celin karaa ama u cusboonaysiin karaa sheeyadayda? Dhamaan sheeyada waxaa lagu soo celin karaa mid kasta oo ka mid ah laamahayaga maktabada. Waxaa jirta meel lagu ridi karo saacadaha aan la shaqayn dhamaan maktbadaha si adiga laguugu sahlo.
Sheeyada waxaa laga cusboonaysiin karaa: • Mid kasta oo ka mid ah lamahayaga inta lagu jiro saacadaha shaqada • Adigoo wacaya 1300 695 427 ama • Adigoo isticmaalaya online catalogue.
Fiidiyowga iyo DVD-ka waxaa la cusboonaysiin karaa laba jeer kuwa kalena ilaa saddex jeer waxaase shardi ah in aan qof kale codsan in loo hayo. Haddii aad ku cusboonaysiinayso shey aad amaahatay telefoonka ama websaytka, fadlan waa inaad haysataa kaarkaaga maktabada.
Cusboonaysiinta websaytka waxaad kaloo u baahan tahay nambarkaaga khaaska kuu ah. Haddii aadan aqoon nambarka khaaska kuu ah, fadlan ka wac 1300 695 427 weydiina marka dambe oo aad maktabada timaado.
Maxaa dhacaya haddii aan la-hayn sheeyga aad raadinayso? Haddii aanaan hayn buugga ama sheyga aad raadinayso, waxaad u soo jeedin kartaa in lagu daro xulkayaga. Taas waxaad ku samayn kartaa adiga oo booqanaya laanta maktabada oo buuxinaya foom caadi ah.
Shaqaalah ayaa iyaguna kaa caawin kara inaad ka amaahato buugaagtaan adiga oo isticmaalaya kaarka deynta ee ka dhexeeya maktabadaha. Xuduud iyo ujro ayaa laga yaabaa lagu dabakho deymanka noocaan ah, sidaas darteed weydii shaqaalaha maktabada haddii aadan hubin.
Macluumaad intaas ka badan Macluumaad intaas ka badan oo Ingiriis ku qoran waxaad ka wici kartaa Maktabadaha Yarra oo ah 1300 695 427. Macluumaad intaas ka badan la xiriira adeega mutarjumka, ama inaad la hadasho khadka adeega mutarjumka adoo wacaya Golaha Degmada telefoonka 9280 1940. ??